FANS KALE ao amin'ny kianjan'ny basikety anatiny - mpankafy Kale
KALE FANS ao amin'ny kianjan'ny basikety anatiny
Ny nofinofin'ny basikety dia ao am-pon'ny tsirairay. Tia milalao basikety ve ianao? Te-hilalao basikety ao amin'ny kianja feno hipoka sy mando ve ianao? Raha feno olona ny kianja anatiny, mahatsiaro mafana sy maina ve ianao? Jereo ny sary, nahita zavatra ve ianao? Misy singa 5 lelany 24ft 7.3m
Ny mpankafy valin-drihana EURUS III, ity maodely ity dia mpankafy valindrihana haingam-pandeha avo lenta miaraka amin'ny maotera PMSM. Ny mpankafy valin-drihana EURUS III HVLS dia mangina ary tena mahazo aina ny rivotra, rehefa milalao basikety ianao dia hahatsapa ho tony sy hankafy izany.
KALE FANS dia be mpampiasa amin'ny indostria sy ara-barotra toerana, toy ny gymnasium, Fitness foibe, fialam-boly zaridainam-panjakana, seranam-piaramanidina, fiara fitateram-bahoaka, toeram-pivarotana lehibe, fampirantiana sy ny toerana hafa. Izahay KALE FANS dia mifantoka amin'ny serivisy avo lenta sy tsara indrindra.
Mifidiana KALE FANS dia ny fisafidianana antoka maharitra, tena manantena izahay fa ho lasa mpamatsy tolotra tso-po anao, ho namana sy mpaninjara.